2017 May 03 | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
WAR DEG DEG AH: Madaxda DFS oo kulan deg deg ah ku yeeshay Villa Soomaaliya, Maxaase ka soo baxay?
MUQDISHO(P-TIMES)- Raysalwasaaraha dawladda Faderaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa shir deg deg ah iskugu yeeray Taliyaasha ciidamada dawladda Faderaalka iyo kuwa khaaska ah ee Ilaalada Madaxtooyada, isagoo amray in ay baaris deg deg ah ku sameeyaan dhamaan ciidamadii goobta joogay. Taliyaasha ciidamada ayaa la amray in ay baaristan kusameeyaan dadka xiran ee markii ugu horeysayba […]
May 3, 20172 CommentsRead More
LA OGAADAY: Wasiirka DF Soomaaliya ee caawa lagu dilay Muqdisho, Muxuu sameeyey maanta ama uu shaaciyey
MUQDISHO(P-TIMES) – Wararkii ugu dambeeyey ee soo gaaraya Warqabadka Puntlandtimes waxay daaha ka roagayaan in dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee uu sameeyey Wasiirka Howlaha guud iyo gaadiidka ee dawladda Soomaaliya ee la dilay ahayd in uu maanta Daah-furey Mashruuca Tayeynta Shaqaalaha oo uu ka so helay Bangiga Horumarinta Africa. Marxuum Siraaji ayaa ka sheegay madashii maanta […]
XOG XASAASI AH: Yaa ka dambeeyey Dilka Wasiirkii Howlaha guud ee DF, Deegaankeese ka soo jeeday?
MUQDISHO(P-TIMES)- Warar dheeraad oo ay heshay Puntlandtimes ayaa daaha ka rogaya in ay fureen rasaasta haleeshay Wasiirkii Howlaha guud ee dawladda Soomaaliya Cabaas Siraaji, Ilaalada Hanti dhawraha guud ee dawladda Soomaaliya, markii ay ka shakiyeen gaarigan oo aad ugu dhawaaday gaariga ay waardiyeynayeen. Ilaaladaas ayaa hadda la xiray dhamaantood, waxaana goor dhaw uu shir dhexmaray […]
WAR DEG DEG AH+AKHRISO: M/weynaha Somalia & RW Itoobiya oo war xasaasi ah soo wada saaray
ADDIS ABABA(P-TIMES)- Shir xasaasi ah oo ay wada yeesheen Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo & Raysalwasaaraha Itoobiya ayaa si adag looga wada hadlay arrimaha xariirka labada dal, iskaashiga ganacsiga, La dagaalana Al- Shabaab iyo qorshaha la xariira dibu dhiska ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed. Shirka mudadii uu socday waxaa si adag loo soo qaaday xariirka dalalkan, […]
DEG DEG: Wararkii u dambeeyey ee Dilkii Wasiirka Howlaha guud ee dawladda Soomaaliya
MUQDISHO(P-TIMES)- Warar dheeraad ah ayaa ilaa hadda ka soo baxaya dilkii goor dhaw loo geystay Wasiirkii Howlaha guud ee dawladda Soomaaliya, kaas oo lagu dilay goob ku dhaw Madaxtooyada Soomaaliya. Ilaa hadda waxaa la qabtay ciidamo Ilaalo u ahaa masuuliyiin kamid ah dawladda Faderaalka Soomaaliya, kuwaas oo lagu tuhunsan yahay dilkan. Saraakiisha Laamaha Amniga ee […]
Wasiir katirsan Xukuumadda Soomaaliya oo hadda lagu dilay Muqdisho+Magaciisa
Wasiirkii Howlaha Guud ee Xukuumadda Soomaaliya Cabaas Siraaji ayaa goor dhow lagu dilay magaalada Muqdisho, iyadoo warar kala duwan ka soo baxayaan dilkiisa. Warar horu dhac ayaa sheegaya in Wasiirka lagu dilay agagaarka Madaxtooyada, xilli uu saarnaa gaariga. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in gaari uu saarnaa ay rasaaseeyeen Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
AKHRISO: Dawladda Puntland oo si deg deg ah uga hadashay Doorashada Cadaado iyo Soo bixida M/weyne Xaaf
GAALKACYO(P-TIMES)- Warsaxaafadeed kasoo baxay Aqalka Madaxtooyada ee dawladda Puntland ayaa looga hadlay Doorashadii Madaxweyne-nimada Galmudug ee ka dhacday magaalada Cadaado.
SAWIRRO: M/weyne Farmaajo sidee loogu soo dhaweeyey dalka Itoobiya
ADDIS ABABA(P_TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gaaray dalka Itoobiya, oo uu ku tagay booqasho 2 maalmood qaadan doonta. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa si weyn loogu dhaweeyey magaalada Addis Ababa, waxaana garoonka diyaaradaha ugu yimid Raysalwasaaraha Itoobiya iyo Madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Wada hadalo xasaasi ah ayay labada dhinac yeelan doonaan, […]
WAR CUSUB: Warar cusub oo naga soo gaaray Xaaladda Gaalkacyo & PTIMES oo heshay xog xasaasi a
GAALKACYO(P-TIMES)- Xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa degan, waxaana wali warar kala duwan ka soo baxayaan Hoobiyayaal kudhacay Xaafadda Israac, waxaana Galmudug ay si adag u beenisay in dhankooda uu ka yimid madfacaas. Gudoomiyaha Galmudug ee gobalka Mudug ayaa sheegay in aysan dhankooda heynin wararka cadeynaya in dhankooda laga riday madfacaas, isagoo sheegay in ay kala shaqeynayaan […]
WAR DEG DEG AH: Hoobiyayaal laga soo riday Galmudug oo ku dhacay Xaafaddaha Gaalkacyo & Dhaawacyo ka dhashay
GAALKACYO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in dhawr Madaafiicda Hoobiyaha loo yaqaano ay ku soo dhacee gudaha Xaafaddaha Puntland ee magaalada, kuwaas oo laga soo riday dhinaca Galmudug. Inta la og yahay mid kamid Hoobiyahaas ayaa ku dhacay guri ay daganayeen qoys, xili duhur qadeynayay waxaana dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen […]